दीपिका पादुकोण बस्ने टावरमा भिषण आगलागी, के भयो उनलाई ? | Tapaiko Khabar
दीपिका पादुकोण बस्ने टावरमा भिषण आगलागी, के भयो उनलाई ?
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : जेठ ३०, २०७५ Flash News, अन्तर्राष्ट्रिय, मुख्य खबर, समाचार
भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बस्ने मुम्बईमा रहेको ३३ तलाको बिल्डिङमा भिषण आगलागी भएको छ ।
बिउमण्डे नामको बिल्डिङको ३२ औं तलामा आगलागी भएको हो । त्यस भवनमा आज दिउँसो २ बजेतिर आगो लागेको थियो । आगो निभाउनका लागि घटनास्थलमा प्रहरीका साथै दर्जनौँ दमकल खटाइएका छन । आगलागी भएको तला पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । अहिलेसम्म मानवीय क्षतिको कुनै खबर भने आएको छैन ।
बिल्डिङको २८ औं तलामा अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको फ्ल्याट रहेको छ । आगलागीको समयमा अभिनेत्री दीपिका घरमा थिइनन् । उनी कुनै कम्पनीको विज्ञापनको छायाँकंनका लागि घर बाहिर गएकी थिइन् । दीपिकाले सन् २०१० मा १६ करोड रुपैयाँमा उक्त बिल्डिङको फ्ल्याट किनेकी थिइन् ।
यस भन्दा अगाडीभरतपुरलाई मेडिकल सिटीका रुपमा विकास गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
यस पछिविश्वकपको अघिल्लो दिन स्पेनका प्रशिक्षक बर्खास्त
भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण